Kutendeuka - K-Tek Machining Co., Ltd.
Chii chinonzi CNC kutendeuka?
CNC lathe ndeye yakakwira-chaiyo, -yakanyanya-inoshanda zvoga michina chishandiso. Yakashongedzerwa neakawanda-chiteshi turret kana simba turret, chishandiso chishandiso chine huwandu hwakawanda hwekugadzirisa tekinoroji, inogona kugadzirisa masisitimu ane mitsara, macalgonal cylinders, arcs uye akasiyana akaomarara workpieces seshinda uye maburi, ane mutsetse kudhindisa uye kutenderera kupindirana.
MuCNC kutendeuka, mabara ezvinhu anoitwa mukati meye chuck uye akatenderera, uye chishandiso chinodyiswa pamakona akasiyana siyana, uye akawanda maumbirwo ekushandisa anogona kushandiswa kugadzira chimiro chinodiwa. Kana iyo nzvimbo iine kutendeuka uye yekugaya mabasa, unogona kumisa kutenderera kubvumira kugaya mamwe maumbirwo. Iyi tekinoroji inobvumidza akasiyana maumbirwo, hukuru uye mhando mhando.
Zvishandiso zveCCC lathe uye nzvimbo yekutendeuka yakaiswa pane turret. Isu tinoshandisa CNC controller ine "chaiyo-nguva" chishandiso (semuenzaniso Pioneer Service), iyo zvakare inomisa kutenderera uye inowedzera mamwe mabasa senge kuchera, maburi uye minda nzvimbo.
Cnc Kutendeuka Service
Kana iwe uchida CNC kutendeuka, isu tiri vamwe vevanogonesa uye vanokwikwidza mutengo wemiti vagadziri, timu yedu inogona kuburitsa zvinhu nenzira kwayo uye nenguva. Iyo yakasiyana siyana yekugona kugona inobvumira K-Tek kuti ipe yakasarudzika mitezo zvikamu. Yedu mizhinji yekugadzira michina inovimbisa yedu inochinjika uye kuvimba. Uye isu tichasangana nezvinodiwa zveindasitiri yega yega yatinoshandira ine yakaringana inoomesera zviyero. Isu tinotarisa pane yemhando yepamusoro uye vatengi.
Cnc kutendeuka zvikamu isu kugadzira
Isu takaburitsa yakawanda yeCNC inoshandura zvikamu mumakore gumi uye timu yedu yeinjiniya yagara ichipa vatengi vedu mhinduro dzinogadzirisa matambudziko avo mukugadzira CNC kutendeuka zvikamu. Isu tinovimbisa zvinowirirana zvemhando yepamusoro machining, kunyangwe mune zvikamu zvakaoma, tichishandisa yakaoma muchina mamodule uye tichishandisa hunyanzvi CNC lathe kushandisa muchina.
Kugadziridza Sarudzo MuCCN Kutendeuka
Tiine yedu yazvino uye yepamusoro mashandiro ekushandisa anosanganisira CNC ekushandura nzvimbo uye 6-axis yekuchinja michina. Isu tinopa dzakasiyana siyana dzekugadzira sarudzo. Kunyangwe akareruka kana akaomarara akashandurwa mativi, akareba kana mapfupi akachinjika akanangana zvikamu, isu takashongedzerwa zvakanaka pamatanho ese ekuoma.
Prototype machine / zero dzakateerana kugadzirwa
Kugadzirwa kwemasvikiro ematch batch
Zvinhu zvinotevera zvakaomarara zvinowanzoshandiswa: aruminiyamu, simbi isina chinhu, mhangura, nylon, simbi, acetal, polycarbonate, acrylic, ndarira, PTFE, titanium, ABS, PVC, bronze etc.